Uma ayethanda wena nenhle foxglove, ezikhulayo kusuka imbewu kuyindlela engcono kakhulu yokuthola ubuhle ewusizo engadini yakho. Excellent izitshalo kungenziwa kuphela etholwe ezindaweni ezivulekile nge kwelanga okuhle. inhlabathi ekhethiwe kumele kube evundile saqotshwa kahle futhi friable.
Professionals belulekwa ukuba ulungiselele phansi, isisu ngokucophelela ke kuzo zonke ukhula izinsalela "izakhamuzi 'esidlule. Ekuqaleni kwentwasahlobo umhlaba bemba, athambise amadivayisi akhethekile digitalis seeded. Uma ukuhlwanyela senzeka esikhathini sangaphambi ebusika, esigabeni isethelwe ngenyanga ngaphambi kokutshala. Kungenzeka ukusebenzisa Umanyolo eziphilayo noma inhlanganisela kubo ne ukwengeza Izithako amaminerali. Imbewu bavame ukunikeza amahlumela kwaphela, isibonelo, oziphatha njengongqingili digitalis lanata. Ngakho-ke, kufanele ebusweni kutshalwe futhi qiniseka kwentwasahlobo. amahlumela Okokuqala zingavela ngosuku 6 th, kodwa ngokuvamile kungakapheli usuku 15th emva kokutshala.
ukhula okubuya imbali imibhede utshani isuswe ngokucophelela, kodwa kudingeka uqaphe kakhulu ne ethambile izithombo abasha izitshalo nezimpande zawo phansi. Abalimi abafuna ukutshala amashumi amahektha foxglove isitshalo, sikhula kusukela imbewu uncamela yimuphi omunye izindlela. Nokho, abalimi non-professional Ngokuvamile bazama ukuthonya i-zikhule izithombo.
Kwezokwelapha, esetshenziswa njengoba amahlamvu nezimbali zalesi sihlahla. Ngakho-ke, ukutshala izitshalo yizimboni njenge-digitalis grandiflora noma mammoth ukuthela 2-3 izitshalo amahlamvu ewusizo isizini ngayinye. Uma ukuvuna amaqabunga kuphela, basuke eqoqwe lapho befinyelela Usayizi 10-20 cm (kuye ngokuthi ungakanani), ngasekupheleni kuka-July no-August. Yokuhlanza ukhethe usuku ezomile libalele, noma izinto zokusetshenziswa kuyoba nenani encishisiwe izakhamzimba.
Ingabe ufuna ukuba engadini yakho kwaba foxglove okunempilo? Ukutshala imbewu, self-seeding noma ngokumane uhlukanisa esihlahleni kungaba efanelekayo. Rapid, yokuqhuma elimnandi uwela ngoJuni-Agasti. izimbali Faded siguqulelwa amabhokisi ezikhangayo nge imbewu, okuyinto kudingeka ukuze sivuthwe futhi ezomile egatsheni.
Lush isihlahla oluhlaza yinhle futhi zokuhlobisa, nangemva kokulahlekelwa efihlekile. Udinga foxglove zokwelapha? Ezikhula imbewu - indlela elula ukuze uthole lokhu imbiza eqoqwe yibhange ezimweni imvelo.
Ukuze ahlobise mixborders imbali ibekwe ezindaweni ezimaphakathi, okufanayo njengoba lesi sitshalo ibukeka iyinhle bevela kuzo zonke izinhlangothi. Palette kuhlanganisa shades digitalis mhlophe, ukhilimu, obomvu, onsomi futhi pink.
Nqumani isitshalo okwaziyo ukuma ku vase kufikela kuzinsuku ezingu-10, ngezinye izikhathi elinganisa ukuyiqabula njengesenzo umcibisholo entsha. Eceleni ukuthi imbali Outlandish kahle ngazivumelanisa nendlela nezihlahla ezihlukahlukene, njenge-rose, Honeysuckle, viburnum, noma orange mbumbulu. Sebawoti futhi ubukeka umuhle, aquilegia ongaqondakali, ingadi izinhlobonhlobo geranium noma lukaKhisimusi latitude yethu peonies.
Abaklami ngokuvamile zisebenzisa digitalis njengoba uthango kuze izitshalo main ezikhulayo.
Ukugcina izinyathelo zokuphepha encane evela amaqabunga eqoqwe kungenziwa kuphekwe decoction. Nokho, ngaphandle isidingo kakhulu , kanye nokubonisana nodokotela akukuhle ukukwenza. Yabela amalungiselelo digitalis njengendlela agent omuhle ophakeme wegazi, kodwa kuyadingeka ukwamukela wesifunda reception ngesikhathi wenhliziyo bayahlanganyela.
Ukunakekelwa Proper yamakhukhamba - isiqinisekiso isivuno esihle!
Indlela sikhule utamatisi kanye ukuthola isivuno esihle
Ngiyanihalalisela iminyaka engu-30 indoda
Julia Pankratova. Siqu ukuphila umethuli Julia Pankratova
Ubugebengu idrama "I Usuke." Abalingisi
Salting izinhlanzi ekhaya